Tank super-esindayo German "Igundane". Izimpawu P-1000 "Ratte"
Ngokuqinisekile izwe neze ukudalwa nezempi oyokwenziwa, ngezinga efana sverhtank "igundane." Okungenani, okwamanje kukhona enjalo kungekho analogue. Kuyini ezithakazelisayo, amaJalimane, esikhundleni salokho, lingakhulumi ke njengoba ethangini, bayibiza ngokuthi "Land Cruiser". Leli gama lilungile. Ngemva Tank "Igundane" kwaba ngendlela emangalisayo omkhulu, futhi umphumela waba ukuthi kungcono qhathanisa ubukhulu wempi. Ukwakhiwa kwezikhali, ukuchumisa eyabekwa kuso, njengoba umthetho, isethwe ku-Cruisers kuhle ezinkulu, njengalezo Gneisenau futhi Scharnhorst, futhi ababanga anti-aircraft izibhamu ukuze kuxoshwe umlilo ekuhlaseleni.
Tank "Igundane" sasinzima ukuze isisindo ngokuhamba endleleni, wayeyoba kalula waphula ebusweni asphalt emhlabathini ugandaganda. Lapho ihamba, kungenzeka ukuba ihlaselwe zonke kodwa ezinye amabhuloho eJalimane. ithangi "Igundane" babudlangile ngempela. Ukuze ukukhiqizwa yayo kwakuzothatha isamba esikhulu isikhathi, kanye yisisindo esikhulu izisebenzi ezinekhono. Kuphela womshini nasemhlanganweni bathole ezinye zezici zalo kanye nasemihlanganweni emikhulu, kumele ube ezokuthutha ekhethekile, nokusingatha izakhi kuzodingeka kabusha ukwenza embonini ethangini. Ngeshwa, akukho Analogue walo mshini enyantisayo ayidalwanga, futhi into ebalulekile ukuthi wayengasekela waboleka imithombo, mhlawumbe 50 noma 100 amathangi, isibonelo, njenge Panzer IV futhi Panther. Uma ithangi "Igundane" lwakhiwe, kwakuyosho ukuthini into eyodwa - okuningi ekunqanyulweni ekuseni impi e-Europe, futhi kwakuyosho cishe abe indondo enhle yanoma yimuphi Museum eSoviet Union noma e-United States.
Indaba le "Igundane" zaqala ngo-1941 esikhathini cwaningo amasu amathangi Soviet, eyenziwa "Krupp". Lolu cwaningo utshelwa hhayi kuphela umqondo yokudala mthandazo oyisibonelo, kodwa kwaba umfutho ukuze kwakhiwe le ezincane maqondana, futhi imishini okuningi okuwusizo. Ngokwesibonelo, Royal "Igundane" noma "Tiger". Ziyakwazi onobuhle abalulekile. Ekuqaleni it is "Igundane" lwenzelwe njengoba ethangini elikhulu esindayo. Nokho, inqubo sokusungula kule ndawo akuyona emi namanje. Ngakho-ke, «P 1000 ratte» eyayizoba ezingaphezu kuka ithangi nje, umgomo wayo kwaba ukuvula ekuqaleni isigaba esisha izimoto ukulwa phansi. Lolu cwaningo lwenziwe ngo-1941, unjiniyela Grote, abake wasebenza phezu ngwenya emkhakheni yezikhali.
Incazelo izici lobuchwepheshe
Ubukhulu sekukonke umshini: nobubanzi ngamamitha 14 futhi ukuphakama kwamamitha 11 no-35 amamitha obuphelele. P-1000 kwakudingeka abe ububanzi amathrekhi 3500 amasentimitha, kepha efaniswe labo esetshenziswa ku ukumbiwa. Njengoba isitshalo amandla ukuze afeze imodeli wasikisela besebenzisa izinjini ezimbili udizili «MAN» (a umthamo ingqikithi 17,000 hp - 2 kuya 8500 hp) izinjini noma eziyisishiyagalombili «Daimler-Benz» (16.000 hp, isb ngamunye 2,000 hp). Lokhu kwaba kancane ngaphezulu uzobe ngenzasi.
tank Super-esindayo "Igundane": ubunjalo imodeli
Isici esiyinhloko lo msebenzi waba ukusetshenziswa iloli kathathu ohlangothini ngalunye. Kubalulekile zalolu hlobo locingo. ngaleyo ndlela ithrekhi ngamunye wayenethuba ububanzi 1200 ngamasentimitha. Futhi kule phrojekthi kukhona ukungqubuzana ethile. Isibalo amaloli ukuthi ngihlangane nabo phansi, likhulu kakhulu imoto nesisindo esingaphezu kwamathani angu-1,000. Noma onjiniyela baye baveza ingcindezi kancane kakhulu emhlabathini, noma isisindo umshini kwadingeka ukuba ngaphezulu. Uma sicabanga komzimba imoto phakathi amaloli, hhayi ukugxila umzimba kanye ophahleni lombhoshongo, ukuqonda ukuthi incwadi kufanele kube okungenani abangu-200 mm. Khona-ke le ngxenye yomthandazo umshini kwakuyodingeka mayelana 740 amathani isisindo. Futhi lokho singabali isisindo ukumiswa, izinjini, amaloli, imibhoshongo nezingalo ophahleni. Kuphela ngabe i izibhamu ezimbalwa phezulu wanezela mayelana amathani 100 isisindo. Kunezizathu ukuphetha ngokuthi umbhoshongo kufanele ibe yokubhuka okungenani ku-250 mm. Ngesisindo sakhe kwakuyoba amathani okungenani 380. Lokho singabali isisindo izikhali, imishini kanye isibhamu umbhoshongo cuffs. Mayelana Ammo Akekho owaziyo, kodwa sidinga ukuthi wonke projectile 3 ton ngabe ukungezwa isisindo kulo mshini. Umphumela uba ukuthi uma ngabe wadala ithangi "Igundane" isiJalimane, isithombe okuyinto ekulesi sihloko, bese isisindo sayo bekungaba amathani 2,000.
Kule ndaba, ukuthuthukiswa imodeli kwenziwa ngokuhambisana Ubukhulu bayo ezingeni eliphezulu kakhulu. Njengoba izikhali abakhulu "Igundane" ithangi umsebenzi ibalwa ngokusebenzisa ezimbili izibhamu asolwandle 28-cm SKC / 34 ubukhulu 283 mm. Ukusebenzisa kwabo kubalulekile. Isisindo isibhamu ngayinye babuyizingalo 48,2 m, futhi ubude emgqonyeni kwaba cishe ngamamitha ayi-15. Uma lokhu obuphelele ukushaja kwaba 1.2 m Lapha isisindo udibi Ukubhoboza projectile (Panzersprenggranate) kwaba 330 kg kanye kuqhume -. 315 kg. ububanzi enkulu yama umlilo ngezibhamu - 42,5 km. Enye kuhilela ukufakwa futhi eyesithathu isibhamu ubukhulu 128 amamilimitha angu. Nokho, ngalo njiniyela wenqaba ngenxa isisindo elinengqondo okwandisa nenqwaba ethangini inani nabashayeli balo. Kwakuthinta bazitshela ukuthi lezi zinto zokusebenza ezimbili 28-cm SKC / 34 kufanele ngokufanele esikhathini turret main. Futhi izinhlamvu ngabo Kwakuhlelwe ukubeka phansi izinhlangothi sikebhe futhi alethe izibhamu, usebenzisa ikheshi.
Njengoba i eyengeziwe ithangi kwezikhali "Igundane" kucatshangwa ukuthi yibona okufanele endow izibhamu anti-aircraft 2-cm Flak 20 .38 amamilimitha angu. Uma ucabangela ubuningi lezi izibhamu ungazange isinqumo sokuphuma impi. Ngokusho idatha zenani yabo okusalungiswa Kusolwa kusuka 2 kuya 8. Ngini lokhu kufakwa nalehleliwe 2 x 15-mm izibhamu Mauser MG 151/15.
Powerplant "Igundane" super-esindayo ithangi Onjiniyela kuhlelwe ukudala esinamandla kakhulu. It zazihlanganisa ezimbili 24 cylinder udizili zasolwandle izinjini MAN V12Z32 / 448 noma 8 carburetor 22 tsillindrovyh Daimler-Benz MB501. Babehlelile ukufaka ezingemuva chassis kanye nophethiloli amathangi kanye radiators. Ngokusho ithangi nabaqambi imodeli wathi, wathi powerplant kufanele nomthamo 20,000 amahhashi okuzosiza ukuthuthukisa ijubane ethangini phezu flat amakhilomitha-14 ngehora. Kukholakala ngaleso sikhathi akukho lapho kuboniswa khona encane ngokuhambisana izilinganiso «P 1000 ratte».
Transmission futhi ibhanoyi
iphuzu Pretty ababuthakathaka ethangini esizayo "Igundane" futhi ngokuvamile wonke lomsebenzi izakhi idatha umshini. Kuze kube sekupheleni kwempi kwakungenakwenzeka ukuthuthukisa onjiniyela ukusula wesifunda chassis futhi powertrain, "p 1000 ratte». Ochwepheshe basikisela ukuthi lokhu kuyisici esiyinhloko phakathi izimbangela ukwehluleka yephrojekthi.
Ukuhlaziya. Izinzuzo nezingozi nebubi
wathi ithangi ukunyakaza abasakwazi eziyinkinga. Wakwazi ukuhambisa kuphela emaphandleni. Dlulani kwebhuloho liphinde akunakwenzeka ukuba bakwazi. Ngenhlanhla, Ubukhulu bayo avunyelwe engu- izithiyo amanzi ukuba angene. Ngisho "Igundane" kwakuyoba kubonakala kuphatheke kabuhlungu kakhulu ngenxa ephakeme icala lokubhidliza okuhloswe ku ibanga okungenani noma Ngokwesilinganiso, ngisho ne-128-milimitha inganono. Ukuvikelwa "Amagundane" ekuhlaselweni emoyeni kwakuyohilela kudalwa lendlu yebhanoyi ekhethekile noma ezinye sifihle obukhethekile ngalo sasiyofana isakhiwo. Le divayisi Ukufihla kakhulu ngangokunokwenzeka. Ngamanye amazwi, isitha oyinhloko 'Igundane "sizohlasela izindiza kanye zezindiza zamabhomu. Besenkolweni buyingozi le-model. Ngisho noma usebenzisa dvadtsatimillimetrovye izibhamu antiaircraft kungaba, futhi ngandlela-thile wakwazi ukushaya off the izindiza kuhlasela yehle ekuhlaseleni, German ithangi super-esindayo "Igundane" nge lingakanani omkhulu kuyinto target sengozini zezindiza zamabhomu. Kodwa «P 1000 ratte» kwadingeka ngasohlangothini oluhle. Phela, elihamba wayezonakekelwa kahle avikelwe ngenxa yokubakhona enkulu ukulwa amaphuzu, futhi kuzofuneka semali isikhala ukunyakaza emzimbeni. Wezikhali, kungashiwo akazange singamelela noma imuphi usongo kule ethangini. Yena ubengase onakalise nezinamathiselo kanye inganono encane. Inzuzo enkulu "Igundane" angakubheka njengesenzo ikhono elikhulu ukumisa isitha. tank wathi kakhulu kancane kuqala, kodwa nokho injalo kungaholela 100% we izitha okukhulu.
Nokho, asikho isidingo sokwakha ukukhohlisa. Intengo Astronomical yokudala "Igundane" ongeke nangayiphi indlela isinxephezelo isandla esinamandla. Uma usebenzisa lokhu tank empini ayenalo kungaba kuphela Kuxhomeke isikhathi ngoba izindiza isitha, ngoba maneuverability elinganiselwe kanye nesivinini esabekayo kwakuyomenza abe isisulu esilula.
Legend World amathangi
Okwamanje, izinkundla eziningi anikelwe "World of Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha" umdlalo, izingxoxo ziyaqhubeka mayelana nokwenzeka ukuvakashela le imodeli Gameplay "ratte P 1000". Lokhu nakuphathwa kule omunye WG TV ukukhishwa. Kule video liye wabonisa ukungakwazi ekuqaleni «P 1000 ratte» kwi-server wabelane ngenxa yobukhulu balo, kodwa imodeli yayo waboniswa. Ngakho-ke, ku-World amathangi Tank "Igundane" sekuyinkinga nganekwane ekhulunywe ezithandwa izinganekwane.
Call of Duty: Advanced Impi akuyona waqala - yini okumele ngiyenze?
Ukubuyekezwa kwe "Thulile Hunter 5" umdlalo: ndima, incazelo kanye nokubuyekeza
Skyrim: kanjani ukuba abe earl, noma vampire Thane
Indlela yokwenza "Avatar" abamba ukushisa futhi lokho kunikeza?
Umdlalo ebanda kunazo noma ngesikhathi evumela izingane ukuba ukudlala
Archeage: Hyde amakilasi. Archeage: amakilasi
Massage Visceral - endleleni yasendulo impatho izandla
Salting ikhukhamba indlela abandayo. zokupheka
Ubuntu, isitayela kanye izinwele izinzipho
Imithi yendabuko kanye nehlukile. Izindlela imithi ehlukile
Dambulla - Buddha ithempeli Sri Lanka
Ukhilimu Fluid: kuyini nokuthi ukukhetha ngazozonke izindlela?
Canon 1DX: Ukucaciswa nokubuyekeza. Usizo lwabenza imisenenzi digital SLR ikhamera
Dysarthria ezinganeni nakubantu abadala: Izimbangela Nezingozi Izimpawu
Umculi German Yozef Boys: Biography